Iibinta taleefannada IPhone-ka ayaa ku koray Shiinaha nooca ugu dambeeyay | Wararka IPhone
Ma jiro qalab kale oo moobiil oo abuuraya rajada ugu badan ee heerka iibka sida iPhone-ka, ma jiro qalab kale oo si joogto ah loogu baaro unug cutub si loo barbardhigo, ugu yaraan heerka dadweynaha, shaki kama qabno in shirkadaha gudaha ay gacanta ku hayaan xogtaan si ay u muujiyaan tiradaada shaqee laakiin ... maxay xiiso u leedahay macaamilka haddii Apple iibisay wax ka badan ama ka yar unugyadii sanadkii hore? Hagaag, wali waa mid kamid ah mowduucyada ugu badan ee laga wada hadlo golayaasha qaarkood. Xogta ugu dambeysa waxay muujineysaa in iPhone 11 dhammaan noocyadiisa kala duwan ay u maleynayaan kororka iibka Shiinaha marka loo eego sanadkii hore.
Aniga ahaan isbarbardhiga heerka iibka ee nooc "S" iyo nooc leh naqshadeynta qaybta bilicsanaanta had iyo jeer waa cadaalad daro, sida ka dhacda inta udhaxeysa iPhone XS, inkasta oo xaqiiqda ah in markan iPhone 11 Pro uu ahaa wax boodbood ah ka weyn wixii aad ka filan lahayd inta udhaxeysa nuqulada, macno ayey sameyneysaa markaad rabto inaad u bixiso aaladda magaca ugu dambeeya "Pro", ugu yaraan waa inuu kasbadaa, waana taas waxa ay ku sameysay kamaraddeeda saddex-geesoodka ah. Si kastaba ha noqotee, iibka adduunka ee iPhone 11 ayaa lagu soo bandhigay warbixintiisa Bloomerg noocyada caadiga ah iyo kuwa "Pro" labadaba waa lagu darayaa.
Macaamiisha Shiinaha waxay umuuqdaan inay aqbalayaan taxanaha iPhone 11 sifiican qaababkii sanadkii hore, badanaa waxaa ugu wacan hoos udhaca qiimaha dukaanka. Waxa kale oo jira koror ku imanaya iibkii aaladihii hore, laakiin kuwa u malaynaya koritaanka ugu badani inay yihiin alaabada casriga ah.
Suuqa Shiinaha waa mudnaanta Apple, Waxay leedahay dhammaan caqligeeda iyadoo la tixgelinayo baaxadda dadka ku nool Aasiyada weyn, suuq wali u baahan in laga faa'iideysto oo ay ku badan yihiin soo saarayaasha qaran. Dhanka kale, iPhone 11 wuxuu umuuqdaa inuu xawaare kusocdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Iibinta taleefannada IPhone waxay ku koraan Shiinaha iyagoo adeegsanaya noocaan cusub
IOS iyo iPadOS 13.2.3 si rasmi ah ayaa loo sii daayay!